राशिफल – Nepal Online Khabar
Mar102022 by Binita TimsinaNo Comments
पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै हेर्नु-होस आजको राशिफल : २०७८ फाल्गुन २६ गते बिहीबार (मार्च १० तारीख)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको समय रहेकोछ । वाणीका कारण सामान्य बादवि’वादको झमेलामा फ’स्ने स’म्भाबना रहेकोछ । नजिकका आफन्तजनहरु बिचको सम्बन्धमा सामान्य ति’क्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । संचित रकम खर्च गर्नुपर्ने स’म्भाबना रहेकोछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) पारीवारिक साथसहयोगमा ब्यापार ब्यवसायबाट मनग्यलाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ । प्रेम सम्ब’न्धमा मधुरता छाउनेछ । अध्यन अध्यापनमा लगाईएको समय महत्वपूर्ण रहनेछ । नयाँ योजनाका साथमा नयाँ कार्यको थालनि गर्ने उत्तम समय रहेकोछ । शिप तथा क्षमताका आधारमा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) गरीरहेको कार्य क्षेत्रमा उत्पन्न तनाबका कारण सामान्य बाद’बिवादको झमे’लामा फसि’एला । मानसम्मानमा आचँ आउन सक्ने सम्भा’बना रहेकोले बिशेष
Sep92021 by Binita TimsinaNo Comments
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)शत्रु र प्रतिद्वन्द्वीको योजना र चलखेल थाहा पाउनाले काम गर्न सजिलो हुनेछ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदाको योग छ । आम्दानी बढ्ने र फाइदा उठाउने समय छ । वैदेशिक यात्राको प्रकिया अघि बढ्न सक्छ । पुरानो लेनदेन र बाँकीबक्यौताको समस्यालाई हल गरिने छ । साथीभाइले सकेको मद्दत गर्नेछन् । कामको चाप बढ्ने छ । आजका लागि शुभ अङ्क : ६ र शुभ रङ्ग : सेतो वा पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ धन्वन्तरीदेवाय नम: न्यूनतम जापसङ्ख्या : ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो)सन्तति, भाइबहिनी र परिवारका सदस्यसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । बोलीकै भरमा विशेष काम सम्पादन हुनसक्छ, क्रियाशील रहनु
Sep62021 by Binita TimsinaNo Comments
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) बोलीको भरमा काम सम्पादन हुने योग छ । विचारको आकर्षणले प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सुन्दर पहिरनमा रमाउँदै व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । अधिकारका लागि केही संघर्ष हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गरे पनि अरूको हातमा गइसकेको अवसर जोगाउन सकिनेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने उत्साहजनक समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ । सन्तानका माध्यमबाट पनि काम बन्ने सम्भावना छ । गरिएका कामको राम्रै मूल्यांकन हुनेछ । विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्नेछन् र प्रसन्नता मिल्नेछ । विभिन्न अवसर प्राप्त हुनाले मन उत्साहित हुनेछ । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ) सहयोगीहरूले विपक्षीलाई साथ दिनाले काममा चुनौती देखिएलान् । आर्जित धन खर्च हुन सक्छ । तर आफ्नै प्रयासले लाभ मिल्न सक्छ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् । विशेष काममा
Sep42021 by Binita TimsinaNo Comments
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) तत्कालको लागी समय मध्ययम भएपनि पछिको लागि शक्ति सञ्चय गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा भनेजस्तो आम्दानि नभएपनि घर जग्गा तथा सवारि साधनको कारोबारभने फस्टाएर जानेछ । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा समय खर्चियपनि नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । आफन्त,अग्रज तथा आमासँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ । माया प्रेममा अबिश्वास बढ्ने हुँदा आजको दिन नभेट्दा नै राम्रो रहनेछ । साना तिना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउँनेछन् । व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकैनै समय खर्चिनु पर्नेछ । अध्ययनमा तपाईको उपस्थिति कमजोर रहनेछ । व्यावसायमा नाफा कमाउन प्रशस्त समय खर्चिनु पर्नेछ । मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) अन्य काममा व्
Sep32021 by Binita TimsinaNo Comments
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आर्थिक रुपमा कमजोर भएको महशुष हुनेछ भने तपाई आफ्नै कारणले व्याबहार बिग्रनेछ । आफन्त तथा साथिभाईसँग टाडिएर देश बिदेशको यात्रा गर्नुपर्ने योग रहेकोछ । खानपानमा अलमलिदा वा काम बिनाको भेटघाटले आफ्नो काम थाति रहनेछ । अध्ययनमा मन नजादा पढाई लेखाई बिचमै रोकिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । सामाजिक काम गर्र्ने अवसर आयपनि उपलब्धि भने न्युन हुनेछ । बिहानको समय राम्रो रहेकोले छोटो दुरिको यात्राको तय हुनेछ । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) दाजुभाई तथा छिमेकिसँग कुनैपनि कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला बिवाद बढ्ने योग रहेकोछ । लेखन तथा साहित्यमा सुरु गरिएका कामहरु थाति रहनेछन् । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम नहुन सक्छ । यात्रा हुने भएपनि यात्राका क्रममा दुख हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । बिहानको समय राम्रो रहेकोले परिवारका साथ समय व्यातित हुनेछ । मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा
Aug302021 by Binita TimsinaNo Comments
आज भदौ १४ गते । सोमबार , कस्तो रहला दिन ? हेर्नु-होस तापाइको आजको राशिफल !
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) कुनै पनि बिषयमा दिईने प्रश्तुतिले अरुको ध्यान आकर्षित गर्न नसकिने हुनाले अलि बिढनै तयारि गर्नुहोला । पारिवारिक माहोलामा जमघट भई स्वादिष्ट भोजन लिने अवसर आएपनि स्वास्थ्मा समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिुनहोला । व्यावसायमा आम्दानि बढाउन प्रशस्त समय दिनु पर्नेछ भने लगानिनया ठाउमा लगानि गर्नको लागि केहि समय कुर्नुहोला । अध्ययनमा सफलता हात पार्न अलि बढि समय खर्चनु पर्नेछ । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) बिभिन्न अवसरहरु आउँने भएपनि ति अवसरहरुलाई सहि रुपमा प्रयोग गर्न नसक्दा समयले तपाईलाई छोड्नेछ । सामाजिक काम गर्ने बाताबरण बन्ने भएपनि जनतासँग सन्तुलित व्यावहार गर्न नजान्दा पद प्राप्तिको योग टरेर जानेछ । आफन्त तथा घर परिवार जनबाट भनेजस्तो सहयोग नपाईने हुँनाले घरायसि कामहरु थाति रहनेछन् । माया प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय मध्ययम रहेकोछ । मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,
Aug292021 by Binita TimsinaNo Comments
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन ,आजको राशिफल हेर्नु-होस :वि.सं.२०७८ साल भदौ १३ गते । आईतबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) साथिहरुको लहैलहैमा लाग्नाले पढन पाढनमा अरुभन्दा पछि परिनेछ । बिज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा समय दिदा व्यापार व्यावसायमा आम्दानि बढाउँन सकिनेछ । बाहिरि खानपानमा ध्यान नदिए स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । प्रेम सम्बन्धमा एकले अर्कालाई शंका गर्नाले मनमुटाब बढ्नेछ । समय र परिस्थितिको अध्ययन नगरि बोल्दा वा कुनै निर्णय गर्दा मान सम्मानमा कमिको महशुष हुँनेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) पुराना साथि भेटिने तथा प्रेम प्रसङगमा दिन खोलेर रमाउन सकिनेछ । प्राविधिक शिक्षामा खोज तथा अनुशन्धानमा समय खर्चिने हरुले उत्कृष्ट नतिजा हात लगाउनु हुनेछ । तपाईको ब्याक्तित्वमा निखारता आउँने तथा सुन्दर पहिरनमा ठाटिएर अरुको मन लोभ्याउन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । सुन्दर तथा बिलाशि बस्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफुतिर लोभ्याउँ
Aug282021 by Binita TimsinaNo Comments
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र १२ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नु-होस राशिफल !
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँकार्य थालनिको योग रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । ब्यपार ब्यवसायमा समय उत्तम रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार रहनेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । अधुराकार्यहरु सुचारु गर्न समयले बिशेष साथ दिनेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा साबधान रहनु होला । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक झमेलामा फस्न सकिने सम्भाबना रहेकोछ । सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने दिन रहेकोछ । मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) प्रतिस्पर्दामा अबल रहीनेछ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा
Aug272021 by Binita TimsinaNo Comments
मेषः नयाँ कार्य थालनिको सम्भाबना रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सामान्य मान सम्मान प्राप्तीको सम्भाबना रहेकोछ । जिवन साथिको साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । निर्णय गर्ने क्ष'मतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका श्रोत्र र साधनका श्रेत्रमा सामान्य खर्च बढ्न सक्नेछ । बृषः प्रतिस्पर्धाजन्य कार्यमा बिशेष सजग रहनु होला । सामान्य आर्थीक अभावको सम्भाबना रहेकोछ । परिवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस हुनेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । कार्यसम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित रहनेछ । मीथुनः रचनात्मक कार्य तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानीका दीर्घकालिन श्रोतहरु फेला पर्नेछन् ।स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । नयाँकार्य थालनिको अवसर समेत प्राप्त हुनेछ । बौ'धिक ब्यक्तित
Aug262021 by Binita TimsinaNo Comments
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) : तपाईको दिन अनुकुल छ। स्वस्थ तन-मनबाट सबै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी माताको कृपा रहनेछ। पारिवारिक सदस्यसँग आनन्दमय समय बिताउनुहुनेछ। मित्र एवम् आफन्तसँग भेट हुनाले घरमा खुशीको वातावरण रहनेछ। वृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) : तपाईले दिन सावधानीपुर्वक बिताउनुहुनेछ। तपाईको मनमा अनेक प्रकारको चिन्ता रहला। स्वास्थ्य बिग्रन सक्ला। आत्मजन एवम परिवारसँग विरोध हुनेछ। अनावश्यक खर्च हुन सक्छ। दुर्घटनाबाट सावधान रहनुहोला। मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) : तपाईको लागि दिन लाभदायक छ। अविवाहितले योग्य जीवनसाथी प्राप्त गर्नेछन्। धन प्राप्तिको लागि शुभ दिन छ। मित्रसँग भेट होला। सन्तानको तर्फबाट समाचार मिल्नेछ। श्रीमती र छोराबाट लाभ प्राप्त गर्नुहुन्छ। कर्कट राशि – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो